Iphaneli yeAluminiyam egqwesileyo i-A55-FS1500 uMenzi kunye neFactory |Gimarpol
Inkqubo yemigangatho ye-UPLOOR Aluminium ephakanyisiweyo iya kubonelela ngeqonga elizinzile elifanelekileyo kwindawo yokucoceka kwezoshishino kunye neendawo zedatha.Ubuso obuphezulu bugqunywe ngokugqitywa kwe-laminate efunekayo.
Iipaneli ziya kuvalwa kwindawo ebonelela nge-equipotential bonding okanye zinokuba ngumxhuzulane obanjwe okanye ngaphandle kweentambo.
I-cross-head okanye i-flat-head-head pedestal head iya kunika inkxaso kwipaneli phantsi kwe-flange kunye nefreyimu yomfanekiso.Intloko ye-pedestal iya kuphinda ibambe ipaneli yomgangatho wokufikelela inika indawo efanelekileyo kunye nokhuseleko olongezelelweyo emva kokuba izikrini zokukhiya ikona zisuswe.
Isixokelelwano somgangatho wofikelelo onyusiweyo siya kukwazi ukumelana nemithwalo eyahlukeneyo engaguqukiyo/eguquguqukayo efunyanwa kubume begumbi elicocekileyo.
-Iphaneli yohlobo lwe-A55, ubukhulu be-600x600x55m, ubunzima bepaneli: 12kgs / pc
-Die-cast aluminiyam panel
-Umgubo ugqunywe ukugqiba
Yenza iziko ledatha eligqibeleleyo okanye ubume be-ofisi ngokubanzi ngenkqubo yomgangatho wofikelelo we-UPIN ephakanyisiweyo.Isetyenziswa kakhulu kumagumbi acocekileyo, iziko ledatha, isikhululo seenqwelomoya, ibhanki, iilabhoratri, izibhedlele, iifektri njl.
A55-FS1500 6700N 42600N 20100N 3 10 amaxesha 5600N10000 amaxesha 4500N 670N
Ngaphambili: ICeramic yokugquma ubuso
Okulandelayo: Umgangatho ophakanyisiweyo weWoodcore